Ingqwalaselo yeDodge SUV, iCrossover kunye neNtsapho yaseMinivan
Uluhlu lweDodge lwezithuthi zesevisi zezemidlalo, ii-crossover kunye ne-minivans ziquka uhambo, i-Durango kunye ne-Grand Caravan. Zonke i-Dodge SUVs kunye ne-crossovers zithola i-warranty yesi-3 000 / 36,000 yama-basic basis ebandakanya uncedo lokukhupha, i-warranty yeminyaka emi-5 / 100,000-mile ye-powertrain kunye newaranti eneminyaka emi-5 / i-100,000-mile.
Emva kwenguqu eyongezelelweyo yonyaka wama-2014, u-Durango wabelana ngesiteji kunye neJeep Grand Cherokee .
Igama leDurango libonakala kuqala kwi-SUV phakathi no-1998, kwaye ngoku kuzalwa kwangoku njengesiXhosa esipheleleyo ngo-2007. I-Durango ifumaneka nge-wheel drive okanye ivili-wheel drive. Ikhona nge-3. litre ye-Pentastar V6 (i-290 hp / 260 lb-ft ye-torque) okanye i-5.7 ilitha ye-HEMI V8 (360 hp / 390 lb-ft yeqhosha). Ixabiso lokuqala liqala kwi-$ 30,495 yeeRandi kwaye iya kwi-40,995 yeeRandi, kunye neenketho zokongeza. I-EPA ilinganisela uqoqosho lwe-Durango lwe-fuel kwi-18 mpg kwiphondo / 25 mpg nomgwaqo we-V6 kunye ne-14 mpg / 23 mpg nomgwaqo we-HEMI.
Uhambo luye lwaziswa njengomzekelo we-2009 kwi-Dodge SUV. I-cross-size crossover eneemigangatho emithathu yokuhlala okuqhelekileyo, Uhambo luhamba ngeyona minivan ngaphandle kweSUV. Inokufumaneka nge-2.4 litre inline-cyilinder injini (173 hp / 166 lb-ft ye-torque) okanye i-injini ye-V6 engama-3.6 (235 hp / 232 lb-ft ye-torque), Uhambo lulinganiswa ukuhambisa i-19 mpg idolophu / 26 mpg umgwaqo omkhulu nge-I4, 17 mpg idolophu / 25 mpg nomgwaqo ngeV6.
Iimodeli ze-I-4 zihamba ngevili-front wheel kuphela. Iimodeli ze-V6 zinokuyalelwa kunye ne-front wheel wheel okanye i-wheel-wheel drive. Amanani asezantsi avela kwi-$ 20,695 ukuya kwii-31,385 ezikhethiweyo.
U-Nitro wabelane ngeqonga kunye nenkululeko yeJeep. Ukwaziswa njengemodeli ka-2007, iNitro yayifumaneka nge-wheel-wheel drive okanye ezine-wheel drive.
Ikhona nge-3.7 litre iV6 (210 hp / 235 lb-ft ye-torque) okanye i-4.0 ilitha ye-V6 kwi-R / T ene-soup (260 hp / 265 lb-ft ye-torque). Amanani asezantsi aqalise kwi-22,985 yeedola aze afike kwi $ 30,140, ​​kunye neenketho zokukhetha. I-EPA ilinganisela uqoqosho lwe-Nitro lwe-fuel kwi-15 mpg yomzi / 21 mpg umgwaqo kunye nevili ezine-wheel drive kunye ne-16 mpg nomgwaqo ongama-22 mpg kunye ne-back wheel-drive.
I-Grand Caravan yayigubha iminyaka engama-30 kwi-Dodge. Kanye kunye ne-twin engama-Chrysler Idolophu kunye nezwe, i-Grand Caravan ibonisa i-chunk enkulu yokuthengiswa kwe-minivan e-United States. Kukho amanqanaba amathandathu e-Grand Caravan, ukusuka kwi-American Value Package ukuya kwi-SE ukuya kwi-SE Plus ukuya kwi-SXT ukuya kwi-SXT Plus ukuya kwi-R / T ye-sporty. Iza kunye ne-3.6-litre, i-24-valve i-V6 injini kunye nexesha lokuguquguqula i-valve kunye ne-six-speed transmission transmission kunye ne-front-wheel drive. Amanani asezantsi amaCaravan aqala kwi-$ 21,795 kwaye alula ukuya kwii-30,995 ezikhethiweyo. I-EPA ilinganisela ukuba i-minivan ikwazi ukufikelela kwi-17 mpg yomzi / 25 mpg umgwaqo.
2010 iDodge Grand Caravan Test Test kunye noVavanyo
Uhlobo lwezithuthi zeeNkonzo ze-Chevrolet
Ingqwalaselo ye-Infiniti SUV kunye neCrossover Family
Indlela Yokubhala Iindaba Eziphumelelayo I-Article
Amazwi e-R-Controled Voice Vowel for Study Word
Ziyindleko Kangakanani ukusebenzisa i-Ethanol?
Kutheni sifanele sifunde ulwimi lwesiNgesi?
I-Ivy League MOOCs - IiKlasi ze-Free Online ezivela kwiIvies